GUDOOMIYE CIRO OO MAANTA QUDBAD KA JEEDIYEY SHIR CAALAMI AH OO KA DHACAY DALKA BELGIUM-KA IYO ARIMAHA UU KAGA HADLEY | Saxil News Network
GUDOOMIYE CIRO OO MAANTA QUDBAD KA JEEDIYEY SHIR CAALAMI AH OO KA DHACAY DALKA BELGIUM-KA IYO ARIMAHA UU KAGA HADLEY
Waxanu Maanta ka qeyb galney shir heer calaamiya oo ey soo qaban qaabisey dowladda Belgium gaar ahaan wasaradda Arimaha Dibadda shirkan ayaa waxa hogaaminayay madaxweynaha Ururka Midowga Africa H.E. Mousa Faki Mahamet
iyo Raisal wasaare ku xigeenka dowladda/Ahna wasiirka ARIMAHA dibadda dowladda Belgium H.E. Mr Didier Reynders waxa Isna ku wehelinayey oo Shirka la daadihinayay. Maamulaha xarunta European Union External action Service. H.E koen Vervaek
Shirkan ayaa waxa lagaga hadlayay ARIMAHA AMNIGA. Sidii ey Isaga kaashan lahayeen Labadda qaradood ee Europe iyo Africa. Shirarka waxa lagu soo casumey madax badan oo kala timi waddana Europe iyo Africa.
Waxey u badnayeen diplomasiyiin ka Kala socda dowlaha Europe
iyo Africa. Waxa Mudane GUDOMIYE Ciro ka mid ahaa Wefti lagu soo casumey iney kelmadooda ka yidhaahdaan madasha.Isagoo lagu amaaney doorka uu ka soo qaatey shaqadda u hayay Qaranka jamhuuriyadda Somaliland. Dorashaddii ugu danbeysey u muujiyey biseyl siyasadeed iyo Waayo aragnimo diplomasiyadeed.
SHIRKAN GUDOMIYE Ciro waxu kaga hadley SADDEX qodob oo Kala ah
1. ARIMAHA dufaanka iyo sidii CAALAMKU ugu gurman lahaa dadka dhibaateysan ee reer Somaliland ee Wax ku yeelowbey Robaabka Dufanka watey ee ka da’ey gobolo ka midda somaliland.
2. Waxu ka hadley ARIMAHA Qadiyadda ICTIRAAFKA iyo sidda shacabka somaliland Wali caalamka uga sugayo iney ka jawabaan codsiga shacabka somaliland ee ey 97% u codeeyeen. Aftidii laga qaadey dadka reer somaliland una codeeyeen gooni isu tagaa jamhuuriyadda somaliland.
3. Qodobka Saddexaad waxu Gudomiye Ciro Shirka ka sheegey iney somaliland doorweyn ka qadatey ARIMAHA NABAD galyadda ee GEESKA Africa Kana qadatey door mihiima oo CAALAMKU qirsan yahey Sidaas daradeedna shacabka somaliland caalamka ka rabaan iney tix galiyaan kuna aqoonsadaan mustaqabalka dhow.
Waxu dhamaan GUDOMIYE Ciro la yeeshey fadhiyo gaar-gaar ah diplomasiyiinta caalamka ka socdey Iyadoo dhamaan Shirkaas ku soo dhamaadey jawi degan iyo Isfaham.
Waxana dhamaan Gudomiyaha madaxdda calaamka ka socdey ku amaaneen. Iyadoo wy adag tahey inuu tanasulo musharax African ah oo ka socda xisbi mucarad ahi. Inuu dalkii la badbaadiyey qas iyo qalalaase dagaal sokeeye oo ka qarx jamhuuriyadda somaliland
Halkan Ka Daawo Muuqalka Warkan